प्रकाशित मितिः असार, 27, 2076
काठमाडौं / धरानस्थिन बीपी कोइरला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनियार ८ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा धरानबाट पक्राउ परेका छन् । उनलाई अख्त्यिारको टोलीले बिहीबार घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
उनीसँगै डा. रामहरि रौनियार पनि पक्राउ परेका छन् । प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको ठेक्कामा कमिशन वापत सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा उनीहरु दुईजना पक्राउ परेका हुन्। रौनियारले विचौलियाको रुपमा घुस रकम लिएर उपकूलपतिलाई बुझाएका थिए ।
प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको ठेक्कामा कमिशनको नाममा घुस मागिरहेको सूचना पाएपछि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट गएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
घुस रकमसहित पक्राउ परेलगत्तै उपकूलपति रौनियार स्वतः निलम्वनमा परेका छन् । बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. रौनियारलाई गत फागुनमा पदमुक्त गरिएको थियो। पक्राउ परेका दुवैजनालाई अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए।
झलनाथ खनाल भन्छन् - सरकारले सीमा सुरक्षित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्छ
मंसिर, 2, 2076
भक्तपुर/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ... ... ...
आज अर्जेन्टिना र उरुग्वेबिच भिडन्त हुँदै
इटहरी/अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलअन्तर्गत �... ... ...
गतिलिँदै दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण
दैलेख/ दैलेखकोे श्रीस्थान र नाभीस्थानलगायतका क्ष... ... ...
काठमाडौं/ एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा घरेलु टो�... ... ...
नेपाल रओमानबिच श्रम समझदारी हुँदै
इटहरी/ नेपाल सरकारले चर्चित श्रम गन्तव्यको रुपमा �... ... ...
नेपालमा चीनलाई काउन्टर दिन्नौँ - भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर
नेपाल-भारत नाका बन्द गरिने
भारतमा सवारी दुर्घटना, ११ को मृत्यु, २० घाइते
प्रधानमन्त्रीले गरे माथिल्लो त्रिशूली थ्री-एको उदघाटन
बिल गेट्स फेरि बने संसारकै धनी व्यक्ति
इन्जुरी समयमा विजयी गोल : ब्राजिलले जित्यो विश्वकपको उपाधि
९९औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेपछि रोनाल्डोले गरे यस्तो बाचा
कोसोभोमाथि इंग्ल्यान्डको शानदार जित : केनले बढाए गोल
मन्त्रीपरिषद् सकेसम्म छिटो पुनर्गठन हुन्छ – प्रधानमन्त्री ओली